ဖက်ချေ - ဝီကီပီးဒီးယား
(အင်္ဂလိပ်: Leaf muntjac)
Amato, Egan & Rabinowitz၊ ၁၉၉၉
ဖက်ချေ (Leaf Deer or Leaf Muntjac) ကို ဖက်ဂျီဟုလည်းကောင်း၊ ပူတာအိုချေဟုလည်းကောင်း ခေါ်တွင်သည်။ ချေမျိုးစိတ်အငယ်စား ဖြစ်လေသည်။ သိပ္ပံအမည်မှာ မန်တီးယားကပ်စ် ပူတာအိုအင်းဆစ် ဖြစ်သည်။ ဖက်ချေကို ၁၉၉၇ခုနှစ်ကမှ ဇီဝဗေဒပညာရှင် အလန် ရာဘင်နိုဝဇ့်က မြန်မာနိုင်ငံမြောက် ပိုင်းရှိ ဝေးလံသီခေါင်သော နောင်မွန်းမြို့နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရာဘင်နိုဝဇ့်သည် ဖက်ချေကို ချေအသေကောင်တစ်ကောင်မှတဆင့် သိရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကနဦးက ယင်းချေအသေကောင်သည် အခြား သောချေမျိုးစိတ်တစ်မျိုး၏ အကောင်ပေါက်ကလေး၏ အသေကောင်ဟု ယူဆခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယင်းအသေ ကောင်မှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသော အမတစ်ကောင်မှန်း သိသွားလေသည်။ သူသည် နမူနာများကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး မျိုးဗီဇစစ် ဆေးမှုမှတဆင့် သမင်မျိုးစိတ်သစ်တစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း သိခဲ့လေသည်။ ဒေသခံမုဆိုးများက ဤမျိုးစိတ်ကို ကောင်းစွာသိ ကြပြီး ဖက်ချေဟုခေါ်တွင်ကြလေသည်။ အကြောင်းမှာ သစ်ရွက်ကြီးတစ်ရွက်တည်းဖြင့်ပင် လုံးဝထုပ်ပိုးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဖက်ချေကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ သိပ်သည်းသောသစ်တောများတွင်သာ တွေ့ရလေသည်။ ယင်းတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပူတာအိုမြို့ ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ဟူကောင်းတောင်ကြားတွင် တွေ့ရလေသည်။ မေခမြစ်၏ နမ့်တမိုင်မြစ်လက်တက်တွင် တွေ့ရ လေသည်။ ယင်းတို့ကို အမြင့် မီတာ ၄၅၀မှ ၆၀ဝ အကြားတွင် တွေ့ရလေသည်။ ယင်းမှာ အပူပိုင်းသစ်တော များနှင့် သမပိုင်းသစ်တောများအကြား ကြားခံနယ်မြေ ဖြစ်လေသည်။ ၂၀ဝ၂ခုနှစ်တွင် ယင်းတို့ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အာရုနာချယ် ပရာဒတ်ရှ်ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရှိ နမ်ဒါဖ ကျားဘေးမဲ့တောတွင်လည်း တွေ့ရလေသည်။ ယင်းအပြင် နာဂလန်းပြည်နယ်၏ လိုဟစ် နှင့် ချန်လန်းနယ်မြေများတွင်လည်းကောင်း၊ နောခ့်လခ့်ဒေသအနီးတွင်လည်းကောင်း တွေ့ရလေသည်။ ယင်းတို့ကို ပတ်ကွိုင်နှင့် ကူမွန်တောင်တန်းများဆုံရာနေရာတွင်လည်း တွေ့ရမည်ဟု ယူဆထားသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသော ဖက်ချေတစ်ကောင်သည် ပခုံးအမြင့် ၂၀ လက်မ (၅၀ စင်တီမီတာ) သာ ရှိလေသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၂၅ပေါင် (၁၁ကီလိုဂရမ်) ထက်ပင် လျော့နည်းသည်။ အညိုနုရောင် ရှိသည်။ အဖိုများတွင် ဦးချိုတက်မပါ သော ဦးချိုများ ရှိပြီး ယင်းမှာ ၁လက်မ (၂.၅ စင်တီမီတာ) ရှည်သည်။ ယင်းမှလွဲလျှင် အဖိုနှင့်အမသည် တူညီသည်။ ဤမျိုးစိတ်သည် သမင်မျိုးစိတ်များအကြားတွင် တမူထူးခြားလေသည်။ ဖက်ချေအကောင်ပေါက်ကလေးများတွင် အစက် အပြောက် မပါပေ။ အခြားသောချေမျိုးစိတ်များနှင့်လည်း ကွာခြားသည်။ အကြောင်းမှာ ဖက်ချေအဖိုရော အမပါ အပြင် သို့ထိုးထွက်နေသောသွားစွယ် ရှိလေသည်။
↑ Timmins, R.J. (2008). "Muntiacus putaoensis". IUCN Red List of Threatened Species 2008. IUCN. old-form url Database entry includesabrief justification of why this species is of data deficient.
↑ Ellis, Richard (2004). No Turning Back: The Life and Death of Animal Species. New York: Harper Perennial. p. 260. ISBN 0-06-055804-0.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖက်ချေ&oldid=697821" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။